‘तू गंगा की मौज, मैं जमुना का धारा’ आइतबार, २९ बैशाख , २०७६ सानै छँदा बम्बैमा हेरेको/सुनेको ‘बैजू बावरा’ को यो गीतको धुन र शब्द आजसम्म गुञ्जिरहेछ... विस्तृत
खै त ताली !? आइतबार, २२ बैशाख , २०७६ सरकारको कुनै अग्रसरताले राज्यलाई राम्रो गर्ने सम्भावना बोक्दछ भने त्यसको निर्धक्क स्वागत गर्ने नै हो। विस्तृत
अन्तरिक्ष र धर्ती आइतबार, १५ बैशाख , २०७६ गिरीश गिरीले माथि हेर्दै गर्दा अमेरिकी भू–उपग्रह तल नियाल्दै थियो, त्यहीबेला एउटा गजबको सन्जोग जुर्न पुग्यो ! विस्तृत
सम्झने तरिका आइतबार, ८ बैशाख , २०७६ कामबाटै सम्झने हो, रवीन्द्र अधिकारीलाई । विस्तृत
सय वर्षअघिको वैशाखी आइतबार, १ बैशाख , २०७६ जलियाँवाला बाग नरसंहारको सय वर्ष पुगिसक्दा हामीले चाहिं खोज, चिन्तन र मनन गर्नु पर्दैन ? विस्तृत
संक्रमणकालीन अन्याय नहोस् आइतबार, २४ चैत्र , २०७५ नेपालको भविष्य बनाउन राजनीतिक स्थायित्व चाहिन्छ, जसको लागि अपरिहार्य छ — द्वन्द्वकालीन बीभत्समा जवाफदेही । विस्तृत
गण्डकी प्रदेशको पहेंलो ढुंगा आइतबार, १७ चैत्र , २०७५ राजधानीको अस्तव्यस्तता र प्रदूषणबाट पोखराले सिकोस् भन्ने अपेक्षा थियो, तर उसले पाठ सिक्छ जस्तो देखिंदैन। विस्तृत
प्रतिनिधिमूलक लोकतन्त्रमा दक्षिणपन्थ खतरा सोमबार, ११ चैत्र , २०७५ संविधानसभाबाट जारी नेपालको संविधानमा अब ‘नयाँ’ फुर्को जोड्न आवश्यक छैन । जे हो यही हो । विस्तृत
राउत, चन्द र तपाईं–हामी शनिबार, २ चैत्र , २०७५ सरकारको पहलकदमीको विरोध गर्दा राज्यलाई हानि गर्ने विचार/काम नहोस्। विस्तृत
डोनाल्ड ट्रम्प शासनकाे जग हल्लाउने ‘द न्यू योर्कर’ का कार्टून मंगलबार, २८ फाल्गुण , २०७५ केही वर्षपछि न्यू योर्क शहर पुग्दा त्यहाँका समसामयिक व्यङ्ग्य र व्याख्या बुझ्न नसकिने भइएछ । विस्तृत
मनोरञ्जनको हक शनिबार, १८ फाल्गुण , २०७५ 'सिनेम्याटिक ल्याङ्ग्वेज' बुझ्न थालेका दर्शकको मनोरञ्जनको चाहना अब मात्र रुवाउने, हँसाउने वा तर्साउने फिल्मबाट पूरा हुने छैन । विस्तृत
‘खुम्बु वाटरफल’ मंगलबार, १४ फाल्गुण , २०७५ विश्व अब ‘एन्थ्रोपोसिन युग’ मा प्रवेश गरिसकेको छ, र एक दशक अघिसम्म पनि असम्भव र अकल्पनीय लाग्ने प्रक्रिया यथार्थ भई देखा पर्दैछन् । विस्तृत
ऐतिहासिक गैंडा, जो दक्षिणएशियाबाट युरोप पुग्यो सोमबार, ६ फाल्गुण , २०७५ एउटा ऐतिहासिक गैंडाको कुरा गरौं, जसले पाँच शताब्दी अघि दक्षिणएशियाबाट युरोप पुग्नुपर्‍यो, विरानो महाद्वीपमा चिडियाखानाको बन्दी भएर अनेकन् कष्ट झेल्नुपर्‍यो, र अन्ततः जहाज विस्तृत
प्लास्टिक प्रकोप ! सोमबार, २८ माघ , २०७५ सस्तो र सजिलो प्लास्टिकलाई उत्पादकदेखि उपभोक्तासम्मले अपनाएका छन्, यसको विषाक्त प्रकृतिका बाबजुद । विस्तृत
हवाईजहाज र हवाईअड्डा सोमबार, २१ माघ , २०७५ नेपालीको हवाईजहाज मोह कुनै बेला आवश्यकता थियो होला, आज यो लत जस्तो भएको छ । विस्तृत
दिल्ली (विश्वविद्यालय) र काठमाडौं मंगलबार, १५ माघ , २०७५ यस विश्वविद्यालयले एकातिर हाम्रा लागि नेपाल बाहिरको संसार देख्ने–बुझ्ने मौका दियो भने अर्कोतिर भारतकै महत्वाकांक्षी र अब्बल विद्यार्थीहरूसँग कुममा कुम जोड्ने अवसर विस्तृत
मुक्तिनाथ सरको समाधि सोमबार, ७ माघ , २०७५ “हामीलाई हाम्रो ज्यान छँदै न्याय चाहिएको छ ।” – भागीराम चौधरी, अध्यक्ष, द्वन्द्वपीडित साझा चौतारी विस्तृत
पाटन ढोका, समृद्धिको द्वार ! मंगलबार, १ माघ , २०७५ पाटन शहरको हरेक कुनामा बजार र संस्कृति थप फस्टाउन पाटन ढोकालाई व्यवस्थित गरिनुपर्छ । विस्तृत
अरनिको र कुब्लाई सोमबार, २३ पौष , २०७५ उतिबेलादेखि आजसम्म नेपालमण्डल (उपत्यका) का नागरिकमध्ये अन्तर्राष्‍ट्रिय सफलता कमाएको अरनिकोजति कोही छैन। विस्तृत
दिव्यन्द्र विक्रम शाह परिहार मंगलबार, १७ पौष , २०७५ एक अनुसन्धानकर्ताले बिर्सिएका जुझारु राजनीतिज्ञ, पत्रकार र फिल्मकर्मी हाम्रोसामु ल्याइदिएका छन्। विस्तृत
जब भारतीय चेकपोष्ट हटे मंगलबार, १० पौष , २०७५ अगाडि बढ्न पछाडिको भू–राजनीति नियाल्न जरूरी छ– हाम्रो उत्तरी नाकामा कसरी रहे भारतीय चेकपोष्ट र कसरी हटाइए। – कनकमणि दीक्षित विस्तृत
‘कान्ति बाइरोड’ आइतबार, १ पौष , २०७५ हेटौंडाबाट उपत्यका भित्रिने अनेक उपाय जुर्दै छन् । विस्तृत
रुबी भ्याली रिपोर्ट आइतबार, २३ मंसिर , २०७५ उत्तर धादिङको यो विकट ठाउँ विपन्न हुनुपर्ने कारण छैन, तर विपन्न छ । विस्तृत
‘नेपाल’ शब्दको पुरातत्व सोमबार, १७ मंसिर , २०७५ प्रखर बौद्धिक, भाषाशास्त्री, शिक्षक तथा समालोचक कमलप्रकाश मल्लको गएको १ मंसीरमा अमेरिकाको जर्जिया राज्यमा निधन भयो । उहाँले विभिन्न विधामा लेखेका सयौं लेखमध्ये सन् १९८३ मा विस्तृत
बसका पीडक विरुद्ध... आइतबार, ९ मंसिर , २०७५ सार्वजनिक यातायातमा हुने यौन हिंसा अन्त्य गर्न देशव्यापी अभियान जाग्न जरूरी छ । विस्तृत